သင့်ကလေးအားလပ်ရက်သို့မဟုတ် matinee စီစဉ်ထားသည်ဆိုပါက, သင်ပွဲတော်ဝတ်စုံမပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ချစ်စရာနည်းနည်းမိုးစ, မင်းသမီး, Fairy, ခေါင်းလောင်းနှင့်လိပ်ပြာများကိုကြည့်ရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျသှားပွီးရှေးခယျြတဲ့အဆင်သင့်ဝတ်စုံကိုစတိုးဆိုင်များတွင်ဒါပေမယ့်ပိုပြီးချွေတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမတို့ပိုမိုဆိုးရွားအသွင်အပြင်အတွက်လက်ဖြင့်ချုပ်သောဝတ်စုံကိုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးလိပ်ပြာဝတ်စုံစေရန်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲဘာမျှဥပမာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား,
ဆမ်လိပ်ပြာပွဲတော်ဝတ်စုံတင်းကျပ်စွာ, ဖိနပ်များနှင့်အဝတ်, လှပသောအင်္ကျီ, အတောင်ပံများနှင့်အင်တာနာအနက်ရောင်ပါဝင်ပါသည်။ နိယာမများတွင်မဆိုအားလပ်ရက်ပါတီဝတ်စုံချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။ အင်တာနာအဘို့အသငျသညျအနက်ရောင်အထည်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခိုင်မာသောဝါယာကြိုးလိုတဦးတည်းအဆုံးအပေါ်ဘောလုံးနှင့်အတူသူမ၏နှစ်ခုအင်တာနာကို လုပ်. , ပုံမှန်ထက်ပါးလွှာကွင်းမှသူတို့ကို attach ။ ဦးခေါင်းပေါ်မှာရှိသမျှဆက်စပ်ပစ္စည်းဆန့်ကျင်သင့်ကလေးဆိုပါကရုံနှစျခု pigtails ကျစ်။
, အဆင်ပြေသူငယ်များအတွက်ဝတ်စုံလွယ်ကူသောဖြစ်သင့်ကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျပ်မနှင့်ခိုင်ခံ့သောတစ်ချိန်တည်းမှာသူငယ် pre-အားလပ်ရက်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်းရှေ့ဆက်အချိန်သူ့ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။
ဒီအတောင်ပံဖြစ်ပါတယ် - သင်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဝတ်စုံကိုလိပ်ပြာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြလျှင်, အရေးအပါဆုံးအရာကိုသင်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ခုစက်ဝိုင်းခြမ်းထည်ကနေဖြတ်, မည်သည့်ပုံစံများ (ပန်းချီကိုသုံးပါလိမ့်မယ်မှာသူတို့နှင့်ဆေးသုတ်ဆန့် aniline ဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဆိုးဆေးများ) ။ ဤရွေ့ကားအတောင်တစ်အလင်း monochromatic ပိုး (ပန်းရောင်အပြာ, အဝါ) မှပြုမိအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့လက်ကောက် - on ဆေးလုံးဝခြောက်သွေ့သောအခါ, ထည်ဗဟို prisoberite နှင့်လည်ပင်း (အင်္ကျီ) တွင်ပြုလုပ် fix နှင့်အတောင်ပံ၏အခြားကြီးစွန်း။
သို့တိုင်ကစာတမ်းများအဘို့အပွင့်လင်းတင်းကျပ်ဖိုလ်ဒါအတောင်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရုံ sequins, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အောက်ကိုအလှဆင်, သူတို့ရဲ့ organza sheathe ရန်ရှိသည်။
သင်တို့သည်လည်းအတောင်ပံများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများစေနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့စာရွက်တစ်ရွက်၏အတောင်ပံပေါ်ပုံစံဆွဲပါ။ ခတ်နှစ်ခုအားလုံးအတွက်တစ်ဦးသင့်လျော်သောတစ်ရှူးများထံမှဖြတ်ပုံစံအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့နောက်တစ်ဦးခိုင်မာသောဝါယာကြိုးယူဝါယာကြိုးလိုင်းအတောင်ပံထပ်နိုင်အောင်ပုံစံနှင့်ကွေးမှပူးတွဲ။ စယ်ပြီးတော့အတောင်ပံများ၏တဦးတည်း pair တစုံကဝါယာကြိုးဘောင်သွင်း ထား. , ဒုတိယ pair တစုံ၏ထိပ်ပေါ်မှာ။ ညင်ညင်သာသာအစွန်းတင်နိုင်နှင့်အတူတူအတောင်ပံချုပ်။ သင်တစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ်ပြောပြအဖြစ်အလှဆင်။
"ဆောင်းဦးရာသီ" ပေါ်တွင် Topiary
ဆောင်းရာသီဖြတ်ညှပ်ကပ်အယ်လ်ဘမ် - အချိန်သည်ဆောင်းကာလဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး၏ Making
Lariat ပုတီးစေ့ - မာစတာအတန်းအစား
ခရစ္စမတ်ဘောလုံး scrapbooking - ခြေလှမ်းမာစတာအတန်းအစားအားဖြင့်ခြေလှမ်း
တစ်ဦး bolero ချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျွန်မနို့တိုက်နှင့်အတူ beets နိုင်သလား?
Hypotension - ကုသမှု
Junya က Watanabe
Prom ကိုဆင်မြန်း 2014
ခြေထောက်ဒဏ်ရာ - ဘာလုပ်သနည်း
ထင်းရှူးတစ်မျိုးကတော့များ၏ယို - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး